Bioglan Healthy Kids Probiotic & Rest + Calm
Size : 50 choc/ chew
အား​အင်​ပြည့်​ဝ​ အ​စာ​အိမ်​ကျန်း​မာ၊​ မော​တာ​ကင်း​လို့​ ကောင်း​စွာ​အ​နား​ယူ​နိုင်​ဖို့​ သား​သား​မီး​မီး​များ​တွက်​ အ​ကောင်း​ဆုံး​ အ​ဖော်​မွန်။​
♦ Probiotic Choc Ball က​ ဘာ​အ​တွက်​လဲ​?
ကျန်း​မာ​တဲ့​အ​စာ​ချေ​စ​နစ်​မှာ​ ကောင်း​သော​ ဘက်​တီး​ရီး​ယား​နှင့်​ မ​ကောင်း​သော​ ဘက်​တီး​ရီး​ယား​ဆို​ပြီး​ ၎င်း​တို့​နှစ်​မျိုး​ကြား​ ညီ​မျှ​မှု​ဆို​တာ​လေး​တစ်​ခု​ရှိ​ပါ​တယ်။​ Bioglan Healthy Kids Probiotic Choc Balls မှာ​ ဆေး​တောင့်​တစ်​လုံး​မှာ​ ကောင်း​တဲ့​ ဘက်​တီး​ရီး​ယား​ 1 Billion ပါ​ဝင်​လို့​ ခန္ဓာ​ကိုယ်​ကြီး​ကျန်း​မာ​ပြီး​ စား​သ​မျှ​အား​အင်​အ​ဖြစ်​ပြောင်း​လဲ​ပေး​ဖို့​အ​တွက်​ တ​ခါ​သောက်​တိုင်း​မှာ​ 500 million CFU of Lactobacillus acidophilus နှင့်​ 500 million CFU of Bifidobacterium lactis ပါ​ဝင်​ပါ​တယ်။​ ချော​က​လက်​အ​ရ​သာ​နဲ့​ ပြု​လုပ်​ထား​တာ​ကြောင့်​ က​လေး​တိုင်း​ဟာ​ နေ့​တိုင်း​သောက်​သုံး​ဖို့​ ပျော်​ရွှင်​မှု​နှင့်​အ​တူ​ ခံ​စား​စေ​မှာ​ပါ။​
ဒီ​လို​ ဘက်​တီး​ရီး​ယား​ နှစ်​မျိုး​ရှိ​တဲ့​ထဲ​မှ​ ကောင်း​တဲ့​ ဘက်​တီး​ယား​ကို​ အ​ထူး​ထောက်​ပံ့​ ပွား​များ​စေ​တဲ့​အ​တွက်​ ကျန်း​မာ​အား​ပြည့်​တဲ့​ ခန္ဓာ​ကိုယ်​ကြီး​ လွယ်​ကူ​စွာ​ ပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ဖို့​ အ​ထူး​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​တယ်။​
ဆေး​ညွှန်း​ - အ​သက်​ (၄)နှစ်​အ​ထက်​တွက်​ တစ်​နေ့​ (၁)လုံး။​
Energy 53kj( 13 Cal) 2120KJ (507 Cal)
Fat Total less than 1g 26.5g
– saturated less than 1g 16.4g
Premium milk chocolate [sugar, milk solids, cocoa butter, cocoa mass, emulsifiers (soya lecithin, 476), flavour] Inulin (5%) (prebiotic), Lactobasillus Acidophilus, Bifidobacterium Lactis. Contains milk and soy. May contain traces of tree nuts.
♦ Bioglan Healthy Kids Rest + Calm Chewables က​ရော​ ဘာ​အ​တွက်​လဲ​?
Bioglan Healthy Kids Rest and Calm Chewable ဟာ​ က​လေး​များ​ ကျန်း​ကျန်း​မာ​မာ​ ကြီး​ထွား​ဖွံ့​ဖြိုး​လာ​နိုင်​ရန်​အ​တွက်​ အ​ထူး​ဖော်​စပ်​ထား​တာ​ပဲ​ ဖြစ်​ပါ​တယ်။​ သတ္တု​ဓာတ်​များ​နှင့်​ ဗီ​တာ​မင်​ ဒီ​ ပေါင်း​စပ်​ခြင်း​သည်​ ကြွက်​သား​များ​နှင့်​ အ​ရိုး​များ​ ကျန်း​မာ​ဖို့​အ​တွက်​ အ​ထူး​ကူ​ညီ​ထောက်​ပံ့​ပေး​ပါ​တယ်။​
၎င်း​မှာ​ Magnesium and Calcium ပါ​ဝင်​တဲ့​အ​တွက်​ အာ​ရုံ​ကြော​စ​နစ်​နှင့်​ ကြွက်​သား​ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​အ​တွက်​ မ​ရှိ​မ​ဖြစ်​လို​အပ်​တာ​တွေ​ကို​ ရ​ရှိ​ခံ​စား​သွား​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။​ Zinc ပါ​ဝင်​ခြင်း​သည်​ တစ်​ကိုယ်​လုံး​နာ​ကျင်​ခြင်း​များ​ကို​ သက်​သာ​စေ​ပြီး​ မျက်​စိ​ကျန်း​မာ​ဖို့​ကို​လည်း​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​တယ်။​ Vitamin D ဓာတ်​က​တော့​ ကိုယ်​ခံ​အား​စ​နစ်​ကို​လည်း​ တိုး​ပေး​ပါ​တယ်။​ ဒါ​တွေ​ပါ​ဝင်​ပေါင်း​စပ်​ခြင်း​သည်​ သက်​တောင့်​သက်​သာ​နှင့်​ အ​နာ​ယူ​နိုင်​ဖို့​ ကူ​ညီ​ပေး​လို့​ Magnesium ဓာတ်​အား​နည်း​ခြင်း​ကြောင့်​ စိတ်​ဖိ​စီး​မှု​တွေ၊​ မော​ပန်း​နွမ်း​နယ်​ခြင်း​တွေ၊​ စိတ်​တို​လွယ်​ခြင်း​တွေ​ကို​ လျှော​ချ​ပေး​တဲ့​အ​တွက်​ ကောင်း​ကောင်း​အိပ်​စက်​စေ​နိုင်​ပါ​တယ်။​
BIOGLAN Healthy Kids SLeep
ကလေးများ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးကူညီပေးမည့် SLeep
Visitors : 446112